Sikufundisa ukuxhumanisa ikhompyutha neDropbox ngokuzenzakalela | Izindaba zamagajethi
Izolo uhlelo lweDropbox lwe-Android lubuyekezwe, futhi kule nguqulo ivumela isici esihle ukuthi konga isikhathi lapho uxhuma ikhompyutha eya kuDropbox ngokusebenzisa izinyathelo ezimbalwa ezilula esizokutshela ngazo manje.
El insizakalo yokubamba ifu engabalulekile Akungabazeki ukuthi isuka kuDropbox, noma iGoogle yehlise amanani ayo wezinhlelo zanyanga zonke, iDropbox ikwazile ukuhambisana nalokho okujwayelekile komsebenzisi one-smartphone noma ithebhulethi.
Lo msebenzi omusha ukuvumela ukuthi uxhumanise ikhompyutha yakho ne-akhawunti yakho yeDropbox ngaphandle kwesidingo sokungena ngemvume, ukukusindisa ukuthi kusho ukuthini. Ngokusebenzisa usebenzisa ikhamera ungaskena ikhodi ye-QR lokho kuzokwenza lo msebenzi usebenze ngokuzenzakalela, ukukubona ngokushesha futhi okuzoholela ekulandweni kohlelo lokusebenza kudeskithophu yakho ukulifaka futhi ube neDropbox kukhompyutha yakho kungakabiphi.
Ungayixhumanisa kanjani ngokuzenzakalela ikhompyutha neDropbox
Into yokuqala okufanele siyenze ukuya kulesi sixhumanisi www.dropbox / connect kusuka kukhompyutha esifuna ukuyifaka kwiDropbox kuyo
Manje kufanele siye efonini yethu kuhlelo lokusebenza lweDropbox. Kusuka kuzilungiselelo, uzothola inketho "Xhuma ikhompyutha"
Lapho okokufundisa okuncane kuvela, kufanele ufinyelele kokukhethwa kukho okungu-2 ukuskena ikhodi ye-QR ezobe ivele ngaphambilini kusixhumanisi esithi www.dropbox / connect
Khomba ikhodi ye-QR futhi izokubona khona manjalo ukukutshela ukuthi ulande ifayela ukuze ufake i-Dropbox kukhompyutha yakho ngaphandle kwesidingo sokuthi ungene kuyo.
Indlela enhle yokonga isikhathi evumela ngezinyathelo ezimbalwa ezilula ukungena ngemvume kwikhompyutha yakho noma leyo ofuna ukuyixhumanisa ukusebenzisa i-akhawunti yakho yeDropbox. Khumbula ukuthi kufanele ube nenguqulo yakamuva yeDropbox efakwe kwi-smartphone noma ithebhulethi yakho ye-Android.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungayixhumanisa kanjani ikhompyutha neDropbox ngokuzenzakalela
Ungazisusa kanjani izinhlelo zokusebenza ezithengiwe ku-App Store